KM-9020 Wiricheya isina kurema - 25 lbs Wiricheya - Karman Healthcare
Yese S-ERGOS ™ Yakagadzirwa muTaiwan - Iyo # 1 Wiricheya Brand * Mari Inowanikwa *
Misheni & Maitiro
AEGIS® Anti-Microbial Shield
Bhalisa Warranty yako
Ongororo & Uchapupu
Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa
Wiricheya Nhau & Zvinyorwa
Wepamusoro Wiricheya Wongororo
S-Rakaumbwa Seating System
zvoseBhati & ChengetedzoNjanji dzeMubhedhaImbwaMazuva ese AidsKarma MawiricheyaChinyorwa WiricheyaKuchengetedzwa KwemunhuSimba MawiricheyaKudzokorora MawiricheyaVanotenderera & VanofambaScootersWiricheya ZvishongedzoWiricheya Kudzosera Zvikamu
×	 ERGO KUTAURA - 19.8	1 × $870.00
Tilt Mune Space Mahiricheya
LT-980 - 13 lbs *
S-ERGO 115 - 25 lbs
S-ERGO 125 - 25 lbs
S-ERGO 305 - 29 lbs
ERGO KUKUNDA - 19.8 lbs
Ergo White - 25 lbs
Nyeredzi Yechipiri - 28 lbs
S-ERGO 105 - 27 lbs
802-DY - makumi matatu
Mutsvuku Mutsvuku - QR
LT-K5 - 28 lbs
KN-800T - makirogiramu makumi matatu nemapfumbamwe
KN-700T - makirogiramu makumi matatu nemapfumbamwe
LT-800T - 34 lbs
LT-700T - 36 lbs
ERGO KUTIZA TP
/wp-content/uploads/2016/04/signup-bg.jpg "height =" 400px "link =" "animation =" fadeInLeft "text_align =" center "text_pos =" center "text_color =" dark "text_width =" 40 % "]
Saina Chikumbiro cheNhau Redu!
____ [contact-form-7 404 "Haina Kuwanikwa"]
musha / chitoro / Chinyorwa Wiricheya / Wiricheya isingaremi
View ngoro "ERGO FLIGHT - 19.8" yakawedzerwa kungoro yako.
Back & Cushion
Bhati & Chengetedzo
KM-9020L - 25 lbs
KM-9020 Yakareruka Wiricheya
Iyo super mwenje & compact KM-9020L vhiri cheya inoratidzira yakamisikidzwa mawrestrests uye gumbo zororo rehuremu huremu, ine tsoka tsoka ine velcro mount gumbo tambo.
Yakakwira-giredhi murazvo unodzora, unofema nylon upholstery. Kupeta backrest kunoita kuti chigaro ichi chiome kwazvo kutakura.
Uyezve, nezviyereso zvakatangira pa25-34 mapaundi, yedu lightweight vhiri-cheya isarudzo huru kana iwe uchida vhiri-cheya iro rinonyanya kushandiswa, kana iwe uchida sarudzo dzakasarudzika, kana kana iwe uine moyo wako wakaiswa pane yakatarwa furemu uye / kana upholstery ruvara musanganiswa. Ichi chikamu chinozvifukidza zvese, nehuremu-mavhiri-zvigaro pamakwikwi mitengo. Kubuditswa neizvi, aya mavhiri-magaro anopa zvimwe zvingasarudzwa uye isu tinowanzokurudzira kuti fananidzo iitwe neinotevera nhanho kumusoro chikamu icho chiri chedu ultralight uremu vhiri-zvigaro uko yekupedzisira yekufambisa michina uye maficha ari pakanyanya kwazvo.
Maonero Edu paGoogle
SKU: KM-9020L Category: Wiricheya isingaremi Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Rated 5.00 kubva 5
Wiricheya Tie Down Kit
Ultra isina uremu 6061 T-6 Ndege-giredhi aluminium furemu
Kupeta backrest yekufamba kana kuchengetedza
Yakagadziriswa armrest & footrest ine velcro mount gumbo tambo
6, sandara akasununguka kumberi casters
20, akatsetseka akasununguka mavhiri ekumashure ane polyurethane matai
Yakakwira-giredhi firati inodzora, inofema nylon upholstery
Yakapetwa Zviyero: 30 ″ x 13 x x 26 ″
Chete 25 lb.nezvitsiko zvetsoka
Chimiro Ruvara: Dema kana Champagne
HCPCS Kodhi K0004*
Chigaro Kureba 18 padiki.
Chigaro Kudzika 15 padiki.
Chigaro Kureba 19 padiki.
Kureba Kureba 19 padiki.
Kunopindirana Kureba 37 padiki.
Pakazara Hupamhi Hupamhi 25 padiki.
Kurema Pasina Riggings 25 lbs.
Kurema Kugona 220 lbs.
Kutumira Kukura 31.5, L x 28.6, H x 11.5, W
Kune Yakazara Sarudzo Rondedzero / HCPCS KODZESE Ndokumbira utore ORDER FOMU
Nekuda kwekuzvipira kwedu mukuenderera mberi nekuvandudza, Karman Healthcare inochengetera kodzero yekuchinja maratidziro uye dhizaini pasina chiziviso. Kupfuurirazve, kwete ese maficha uye sarudzo dzinopihwa dzinoenderana neese masisitimu eiyo super isina kurema wheelchair
KM-9020 isina kurema wheelchair UPC #
*Paunenge uchibhadharisa, ndapota tarisa nemazuvano madhaidhi ePADAC. Ruzivo urwu haruna kuitirwa kuti rwuve, uyezve harufanire kutorwa sekubhadhara kana kuraira kwepamutemo. Vapiro vane basa rekuona makodhi akakodzera ekubhadharisa kana vachiendesa zvirevo kuchirongwa cheMedare uye vanofanirwa kubvunza gweta kana vamwe vanachipangamazano kuti vakurukure mamwe mamiriro ezvinhu mune rumwe ruzivo.
25.1 makirogiramu - 35 lbs
250 lbs kana zvishoma
Karman Wheelchair Tie Down Kit PADDED RATCHET - Yakaumbwa ergonomic rabha inobata inopa yakasimba yakachengeteka kubata. Rubha yakavharwa kuburitsa trigger iri nyore kuburitsa pane inobata. VINYL YAKADZIDZWA S HOOKS- Inopa kurwisa kwekudzivirira uye inodzivirira kukwenya mitoro uye anchor pamusoro YAKASIMBA YAKASIMBA YEMAHARA- 100% Polyester TOP SELLERS
KM-BT10 - 22 ″ kusvika 30 ″
Ultra Lightweight Wiricheya
S-ERGO 106 - 27 lbs
KM-802F - makirogiramu makumi matatu
ERGO NDEGE-TP 18
ERGO LITE - 18 lbs
KN-920W - 41 lbs
KM-8520 22 ″ - 35 lbs
T-2700 - 29 makirogiramu
S-ERGO ATX - 15.4 lbs